Suuqgeynta Suuqgeynta Habdhaqanka Ugufiican: Waa maxay kululaynta IP-ga? | Martech Zone
Waa maxay IP Warming?
Arbacada, Maarso 25, 2020 Khamiis, Maarso 26, 2020 Douglas Karr
Haddii shirkaddaadu u dirto boqollaal kun oo emayl halkii marba, waxaad ku dhex geli kartaa arrimo muhiim ah oo leh bixiyeyaasha adeegga internet-ka oo ku soo hagaajiya dhammaan emaylladaada galka qashinka. ESPs badanaa waxay dammaanad qaadaan inay soo diraan emayl oo badanaa waxay ka hadlaan heerkooda sarreeya heerka gaarsiinta, laakiin taasi dhab ahaan waxaa ka mid ah in email loo diro a galka qashinka. Si aad dhab ahaan u aragto kanaga gaarsiinta sanduuqa, waa inaad ka faa'iideysataa madal dhinac saddexaad ah sida wada-hawlgalayaashayada 250ok.
Server kasta oo diraa email wuxuu leeyahay cinwaan IP ah oo laxiriira, ISPskuna waxay ilaalinayaan tilmaamaha cinwaanadan IP-ga iyo imisa bounce iyo spam cabasho ah oo ay ka helaan adeegsadahooda emailka laga soo diray cinwaanada IP-yadaas. Maaha wax aan caadi ahayn in qaar ka mid ah ISP-yada ay helaan cabashooyin yar isla markaana ay isla markiiba u maraan dhammaan emayllada dheeraadka ah galka qashinka halkii laga heli lahaa sanduuqa.
U guurista Adeeg Bixiye Email Cusub
Inkasta oo liiskaaga macmiilku uu noqon karo 100% macaamiil email xalaal ah oo doortay, ama labalaabay ikhtiyaarrada suuqgeynta… aad u guureyso adeeg bixiyaha adeegga emailka oo aad u dirto liiskaaga oo dhan waxay qeexi kartaa halaag. Dhowr cabashooyin ayaa isla markiiba calaamadeyn kara cinwaankaaga IP-ga oo cidina kama heli doonto emaylkaaga sanduuqa sanduuqa.
Dhaqan ahaan ugufiican, markay dirayaasha waaweyn usoo haajiraan adeeg bixiyaha emaylka cusub, waxaa lagugula talinayaa inuu cinwaanka IP-ga noqdo kululaaday. Taasi waa, inaad dayactireysid adeeg bixiyahaaga emaylka ee jira adoo kordhinaya tirada farriimaha aad kudirayso adeegga cusub… illaa aad magacaaga uga dhisayso cinwaanka cusub ee IP-ga. Waqti ka dib, waad u guuri kartaa dhammaan fariimahaaga laakiin marnaba ma rabto inaad sameyso hal mar.
Suuqgeynta Emailka: Waa maxay kululaynta IP-ga?
Sida diirimaadku uga kooban yahay tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah si loo miiro muruqyada loona yareeyo halista dhaawaca, kululaynta IP-ga ayaa ah habka nidaamsan ee loogu daro mugga ololaha toddobaad kasta cinwaanka IP-ga cusub. Haddii aad sidaas sameysid waxay kaa caawin doontaa sameynta sumcad wanaagsan oo aad u dirto Bixiyeyaasha Adeegga Internetka (ISPs).
Smart IP Warming: Talaabada Koowaad ee Bixinta Emailka
Macluumaadka kululaynta IP
Sawir-gacmeedkan oo ka socda Uplers wuxuu qeexayaa oo muujinayaa hababka ugu fiican diirinta cinwaankaaga IP adeeg bixiyahaaga cusub ee adeegga iimaylka, oo kugula socodsiinaya 5 tallaabo oo muhiim ah:
Hubso inaad raacdo dhammaan hababka ugu fiican ee soo-dejinta emaylka ka hor intaadan dirin inta ugu horreysa emayllada diirimaadka IP.
IP-gaaga heeganka ah waa inuu lahaadaa rikoor tilmaame ah oo lagu dejiyay DNS gadaalkiisa (Magaca Magaca Nidaamka).
Qaybi macaamiisha emailka ku saleysan la shaqeynta emaylladaadii hore.
Furaha kululaynta IP-gu wuxuu si tartiib tartiib ah u kordhinayaa tirada emayllada aad dirto.
Samee nadaafadda ka dib dirista.
Waxay sidoo kale tilmaamayaan qaar ka reeban kuwa bixiya Adeegga Internet ee gaarka ah (ISPS):
Yahoo, AOL, iyo Gmail waxay soo bandhigaan arrimo xoog leh iyagoo u kala qaybinaya emayllo tiro kala duwan, taas oo dib u dhigaysa dirista emaylka. Waa la xallin doonaa marka aad dirto emayllo qaarkood oo leh qiyaaso wax ku ool ah.
Dib udhaca ayaa caadi ka ah AOL, Microsoft, iyo Comcast. Dib udhacyadan ama 421 soo kabashada ayaa dib isu tijaabin doona 72 saacadood. Haddii aan la soo gudbin karin waqtigaas ka dib, waxay u soo kici doonaan sidii 5XX iyo diiwaanka soo-kabashada ayaa loo kaydin doonaa qalad 421. Marka sumcaddaadu kobcdo, dib u dhac dambe ma jiri doono.
Tags: AOLjilicsanadeeg bixiyaha adeegga emaylkaGmailbixiyaha adeegga internetkaip kululayntaispxafiiskayahoo